သတင်း - Automotive Cross Car Beam Pipe အတွက် Laser Cut Solution
Automotive Cross Car Beam Pipe အတွက် Laser Cut Solution
ကိုရီးယားဗီဒီယိုတွင် Cross Car Beam အတွက်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းနည်း
ဖိုင်ဘာလေဆာပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များသည် ကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်ထူးခြားသောအားသာချက်ရှိသည် Cross Car Beams (automotive cross beams) because they are complex components that makeadecisive contribution to the stability and safety of every vehicle that uses them. Therefore the quality of the finished product is of paramount importance. As individual beams inside the vehicle, they ensure that they do not compress the passenger compartment in the event ofaside collision. Cross Car beams also support the steering wheel, airbags, and the entire dashboard. Depending on the model, we can manufacture this key component from steel or aluminum, and the laser cutting machine performs well for cutting these materials.
Hyundai Motor Company သည်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အခြားဘက်များသို့တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်ဖြစ်လာရန်ကတိပြုထားသောကိုရီးယားနိုင်ငံ၌နာမည်ကျော်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hyundai Motor Group သည်သွပ်ရည်သံမှအချောကားများအထိအရင်းအမြစ်များကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်သောဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုကို ဦး ဆောင်နေသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကုမ္ပဏီသည်ပိုက်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုမိတ်ဆက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၁။ ၀ ယ်သူ၏ထုတ်ကုန်သည်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ပိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားပြီးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
2. ပိုက်အချင်း 25A-75A ဖြစ်ပါသည်
3. အဆိုပါချောပိုက်အရှည် 1.5 ဖြစ်ပါတယ်
၄။ အပြီးသတ်ပိုက်အရှည်သည် ၈ မီတာဖြစ်သည်
လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းပြီးနောက်ကစက်ရုပ်လက်မောင်းကိုတိုက်ရိုက်ကွေးနောက်ဆက်တွဲနှင့်စာနယ်ဇင်းအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ချောပိုက်ဖမ်းပြီးနိုငျကွောငျး 5. တောင်းဆို;
6. ဖောက်သည်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်, အများဆုံးအပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းလျော့နည်းပေါင်း 100 R ကို / M ကထက်မျှမက,
7. အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းမျှ burr ရှိသင့်
ဂရုတစိုက်လေ့လာပြီးနောက် R&D ဌာနနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာတို့အပါအ ၀ င်အထူးသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
P2060A ၏အခြေခံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် P2080A ပိုက်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်တစ်လုံး၏လိုအပ်ချက် ၈ ခုနှင့်အလိုအလျောက်တင်ခြင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကွေးပိုက်၏အပေါက်များကို 3D စက်ရုပ်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် .
Customize Solution ကိုရယူပါ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း LASER TUBE CUTTING MACHINE ရှိသည်။ ယခုမူသင်၏စိတ်ကြိုက်အဖြေကိုရရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုစူးစမ်းရန်အချိန်ရောက်ပါပြီ။
မူပိုင်ခွင့် © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. All Rights Reserved